နိုင်ငံရပ်ခြားက ကွန်ပြူတာတွေကိုပါ လှမ&#4 - MYSTERY ZILLION
နိုင်ငံရပ်ခြားက ကွန်ပြူတာတွေကိုပါ လှမ&#4
June 2010 edited June 2010 in Sharing
ကျွန်တော် ဒါလေးကိုသိထားတာတော့ တော်တော်ကြာပါပြီ
ဒါပေမယ့် တကယ်ထိထိရောက်ရောက် အသုံးမပြုခဲ့ဖြစ်ဘူး (အသုံးလည်းမလိုခဲ့တာကို)
ခုတော့ ကျွန်တော် ကောင်မလေးက တခြားနိုင်ငံကိုထွက်သွားပြီ:redface::redface:
ကျွန်တော် ကောင်မလေးက ကွန်ပျူတာဆို ဘာမှကောင်းကောင်း မသိနဲ့
ကျွန်တော် မှာ အင်တာနက်မှာ သူနဲ့တွေ့ဖို့ကို တော်တော် ကျိုးစားယူရတယ်
ဒီကနေ skype အကောင့်ကို စင်ကာပူ အန်လစ်မစ်တတ် ၀ယ်ထားပြီး ဖုန်းနဲ့ လှမ်းလှမ်းပြောပေးနေရတာ
vzo နဲ့ မျက်နှာလေးမြင်ဖို့အတွက်ကို
ဟိုတလောက မှ ဒီဆော့၀ဲလေးကိုပြန်သတိရမိတယ် အဲ့ဒါနဲ့ သုံးကြည့်တာ တော်တော်သတ်သာတယ်
ကျွန်တော် ဒီဆော့၀ဲလေး အကြောင်းကိုလည်း တခြား ဆိုဒ်တခုကနေ ဖတ်လိုက်ရတာပါ
၁ နှစ်ကျော်လောက်တောင်ကြာပါပြီ ကောင်းကောင်းတောင်မမှတ်မိတော့ဘူး ဘယ်ဆိုဒ်ကလည်းဆိုတာ
ဒီဆော့၀ဲလေးက နိုင်ငံတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကွာေ၀းနေပါစေ လှမ်းပြီးတော့
ကိုယ့်ရှေ.မှာသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူူတာလိုမျိုး အေ၀းကနေ ကိုင်တွယ်ပြီး
ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်း ပြင်ဆင်ပေးလို. ရပါတယ်။
ထဲကို၀င်ပြီး အကောင့်တခု လုပ်လိုက်ပါ
လွယ်လို့ လူတိုင်းလိုလို လုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
အဓိက က Mail နဲ့ password ပါပဲ
သူ့ဆော့၀ဲကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရပါမယ်
add computer ဆိုတာ ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ
အဲ့မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့ ဖိုင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ပြီးရင် ကိုထိမ်းချုပ်မဲ့ စက် မှာ ဒီဆော့၀ဲလေး ရမ်းခိုင်းလိုက်ပါ ။
Next => I agree => typical => Next
=>Next=> computer access code ဆိုပြီးတောင်းရင် ပေးချင်တဲ့ password 8 လုံး လောက်အနည်းဆုံး
ပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှာလည်း အဲ ဒီ 8 လုံးပဲ ပြန်ရိုက်။ခုရိုက်တဲ့ password ကအရေးကြီးပါတယ် သေသေချာလေးမှတ်ထားဦးနော် ။
Email တောင်းရင် ခုနက သူ့ဆိုဒ်မှာ အကောင့် ဖွင့်တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ အီးမေးကို
ပြန်ထည့်။ password ကလဲ အကောင့်ဖွင့်တုန်းကပေးတဲ့ password ပဲ။
logmein freee ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ဦး။ ပြီးမှ Nextလုပ်။ဒါဆိုရင် ပြီးသွားပါပြီ။
Task Bar ရဲ့ ညာဘက်အောက်မှာ Logmein-Enable&Online ဆိုပြီး tray အ၀ိုင်း ပုံလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
အဲဒီ ကွန်ပြူတာကို ဖွင့်ထားပြီး တခြားကွန်ပြူတာကနေပြီး အင်တာနက်က
www.logmein.com (http://www.logmein.com/) ဆိုတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ကို ပြန်၀င် ၀တ်ဆိုဒ်ရဲ့ ညာဘက် ထိတ်နာမှာ Email မှာ ကိုယ်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ mail နဲ့ password ပေးပြီး၀င်
ဒါဆို အဲ့ဆော့၀ဲ တင်ထားတဲ့ စက်ကို ကိုယ်ဘယ်ပဲရောက်နေနေ လှမ်းပြီးတော့ ကိုယ့်စက် လိုမျိုး ၀င်သုံးလို့ရပါပြီ
ဟိုဘက်က လူက မောက့် တောင်ကိုင်စရာမလိုပါဘူး အကုန်လှမ်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်
ကိုယ့်ဘာသာကို ဆက်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ လွယ်ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီလောက်ပြောနေတာတောင် တော်တော်များနေပါပြီ
for iphone logmein ignition ipa ..
ဟီး ... အနော် ရစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်. အဲ .. အတွန့်တက်တာလဲမဟုတ်ဘူးနော်
နိုင်ငံခြားက ကွန်ပျူတာက Window မဟုတ်ပဲ Linux ဖြစ်နေရင်ကော??? ဘီလိုလုပ်မလဲ?? စဉ်းစားမိတာလေးပါ ... အဟတ်
ူlog me in ကနှေးတယ်။ TeamViewer ဆိုတာရှိတယ် သုံးကြည့်ပိုကောင်းတယ်။ function တွေကတော့တူတူလောက်ပါပဲ။
[HTML]ဟီး ... အနော် ရစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်. အဲ .. အတွန့်တက်တာလဲမဟုတ်ဘူးနော်
နိုင်ငံခြားက ကွန်ပျူတာက Window မဟုတ်ပဲ Linux ဖြစ်နေရင်ကော??? ဘီလိုလုပ်မလဲ?? စဉ်းစားမိတာလေးပါ ... အဟတ် [/HTML]
Linux ပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော် မစမ်းဖူးသေးဘူး
[HTML]log me in ကနှေးတယ်။ TeamViewer ဆိုတာရှိတယ် သုံးကြည့်ပိုကောင်းတယ်။ function တွေကတော့တူတူလောက်ပါပဲ။ [/HTML]
TeamViewer ကျွန်တော် စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်
ကျွန်တော်တွက် အကယ်အသုံး၀င်ပါတယ် ..
RAT tool for Linux ဆိုပြီးရှာကြည့်ပေါ့ဗျာ